Mune Nhau - Popular Jewelry
Unoda iyo scoop yemukati pane imwe yekutungamira zvishongo zvemagetsi muindastiri? Unofarira maitiro akagadzirwa zvishongo uye / kana grillz akagadzirwa? Unofarira muchidimbu chemukati chebasa redu repasi rose? Uine nyaya iwe yaungada kufukidza kana yaungade kutiita isu mune yako media mharidzo? Inzwa wakasununguka kutibata nesu info@popular.jew jewelry yemubvunzo wenhau.
Ipfupi inomhanya runyorwa rwezvinobatanidza kune midhiya uye zvinyorwa zvatakaiswa kana kuoneka pa:
Zvinyorwa / Dhinda
Zvinyorwa / Bvunzurudzo
Firimu / Music Vhidhiyo
SinoVision - Rap Yakakurumbira Zvishongo Spot muChinatown